Jubbaland oo digniin u dirtay odayaasha la kulma Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Jubbaland oo digniin u dirtay odayaasha la kulma Al-Shabaab
Maamulka Jubbaland ayaa odayaasha dhaqanka ee ku sugan Gedo iyo Jubbooyinka uga digtay in ay la kulmaan Kooxda Al-Shabaab, kadib kulan amniga looga hadlayay oo ka dhacay Kismaayo.
KISMAAYO, Soomaaliya - Kulan ay magaalada Kismaanyo ku yeesheen Golaha amniga Maamul goboleedka Jubbaland, kaas uu shir gudoomiyay Madaxwaynaha Maamulkaas Axmed Maxamed Islaam ‘Madoobe’, ayaa looga hadlay arrimo badan oo ku saabsan amniga degaannada Maamulka iyo doorashooyinka.
Shirka waxaa diiradda lagu saaray u diyaar garowga doorashooyinka iyo amniga goobaha lagu qabanayo doorshada ee degaannada maamulkaas, waxaana digniin culus loo jeediyay odoyaasha dhaqanka oo loo sheegay in aysan la kulmi Karin Al-Shabaab islamarkaana aysan wax wada shaqayna la yeelan karin, si aysan saamayn ugu yeelan doorashada.
Qoraaal ka soo baxay Golaha Amniga maamulka Jubbaland ayaa lagu amray hay’adadda nabad sugida in ay tallaabo ka qaado cid kasta oo ku xadgudba go’aanka, golaha ayaana isku raacay in la joogteeyo shirka amniga ee maalinlaha ah ee hay’adaha amniga maamulka Jubbaland.
Jubbaland ayaa ka mid ah meelaha ay Al-shabaab ku xoogantahay, waxaana sidoo kale loo tixgaliyaa in ay tahay mid ka mid ah xuddunta sababtay khilaafaadka dabadheraaday ee doorashooyinka guud ee dalka.